Istaraatiijiyada Pathfinder, waxaan ka ganacsanaa guri iyo dib u rogis | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyada Pathfinder, waxaan ka ganacsanaa guri iyo dib u rogis
Ikhtiyaarrada jihada isbeddelka hadda jira ayaa keenaya macaashka ugu badan, laakiin waa muhiim in la furo heshiis sida ugu dhow ee ugu macquulsan bilowgiisa. Mid ka mid ah astaamaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo tilmaamaya bilowga dhaqdhaqaaq cusub ayaa noqon doona dhammaadka dhaqdhaqaaq dhinaca dambe ah (flat), kaas oo suuqa ku qarash gareeya ilaa 70% waqtiga ganacsiga. Istaraatiijiyadda Pathfinder ee ku saleysan tilmaamayaasha farsamada ee caadiga ah waxay siisaa natiijooyin isdaba-joog ah oo la saadaalin karo labadaba burburka guriga iyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee xuduudaha.
Nooca: Isbeddel iyo fidsan
Waqtiga Mid kasta oo ka mid ah baaxadda M1-D1. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa saddex tilmaamood oo heer sare ah.
• Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa SMA (SMA) - wuxuu muujinayaa jihada isbedelka hadda socda ama cusub.
• Bollinger Bands (BB) - jihada jiifka ah ee khadadka BB wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka guri, burburka khadadka ayaa noqon doona calaamadda binary ee dhammaadkeeda. Haddii baaxaddu ballaadhan tahay, waad furi kartaa xulashooyin aad dib uga laaban karto xuduudaha. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
• Tusaha Awoodda Ehelka (RSI) - oscillator-ku wuxuu qiimeyn doonaa isu-dheellitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 70 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 30 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
Calaamadaha calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah :
Ikhtiyaar CALL. Qiimaha iyo khadka celceliska guuritaanka ayaa dib uga soo laabaneysa xadka ugu hooseeya ee BB ama ka soo gudub khadkiisa dhexe salka hoose ilaa sare. RSI ayaa kor u kacday ama kabaxday (heerka 70);
Dooro door. Celceliska Qiimaha iyo Dhaqaaqa ayaa ka gudbaya celceliska BB kor ilaa hoos ama ka soo baxa xadka kore.
Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 3-4 daqiiqo xitaa haddii waqti shaqeynaya la doorto daqiiqad ama 30-seken, sida fiidiyowgeena. 'Cidhiidhiga' kanaalka qiimaha Bollinger Bands, ayaa aad ugu sarreeya suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog leh ka dib dhammaystir buuxa. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xudduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, haddii kale, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha binary ee bilaashka ah ay muujinayaan jihada saxda ah.
Xitaa waqtiga loogu talagalay daqiiqada, RSI marar dhif ah ayey tagtaa aagagga xad dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo RSI ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furan kartaa ikhtiyaar!
In kasta oo xaqiiqda ah inaad maalintii oo dhan ganacsan karto, natiijooyinka ugu faa'iidada badan ayaa la helay qeybtii labaad ee fadhigii Mareykanka (laga bilaabo 16:00 UTC) iyo dhammaadka kalfadhigii Aasiya (illaa 06:00 UTC).
Waxaan la soconaa barxadda ganacsiga laba-geesoodka ah ee sii-deynta wararka aasaasiga ah ee muhiimka ah iyo tirakoobka. Ma fureyno ikhtiyaarka isla marka daabacaadda kadib, oo, haddii ay suurtagal tahay, xirno macaamilka hadda jira 15-20 daqiiqo kahor daabacaadda.
Ganacsi otomaatig ah sida ku xusan istaraatiijiyada «Pathfinder» waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.